Ngophuhliso loluntu, iimfuno zabantu ukuphucula, ezifana ice cream kunye neziselo ezibandayo ezifana neziselo ezibandayo, incasa ngakumbi, ukutya okunempilo, ingakumbi ukuzalwa ulwelo nitrogen ice cream kwenza ushishino ice cream ukuphuhlisa ngakumbi, ulwelo nitrogen ice cream. Ukusuka kwincasa yokutya okanye umsi ogcweleyo umoya unika umdla ngokwenene.
Kwimveliso yolwelo lwangaphandle lwe-nitrogen ye-ayisikrimu kunye neziselo ezibandayo ziye zathandwa kwimeko, yasekhaya sele iqalile ukungena kwinqanaba lovavanyo, isiphelo sesizathu, akukho nto ingaphantsi kwemveliso yangaphandle kunye nophuhliso lwale mveliso lubiza kakhulu, emva koko. ukudluliselwa China, amaxabiso ayo aphezulu , Cumbersome, kunye nommandla kunye nezinye izinto.
▷ Inkqubo ye-supercharging yombane ikhuselekile kwaye inokwethenjelwa ngokulawula isixhobo sokunyusa kunye nokuzinzisa uxinzelelo.
▷ Itekhnoloji yokufakwa kwe-vacuum ephezulu yokufakwa kwe-thermal inelahleko ephantsi yenitrogen engamanzi
▷ Umatshini wonke unenkangeleko entle ngakumbi ngenxa yenkqubo yokutshiza ngeplastiki
▷ uyilo lwe-ergonomic lwenza ukuba ukusebenza kukhululeke ngakumbi
▷ I-Brittle coating igudile kwaye ayibangeli ukunyibilika, ukudibanisa, ukuqhekeka komphezulu okanye ukuxobula.
▷ Inencasa engcono kwaye isempilweni
Ukupholisa ngokukhawuleza, i-taste ethambileyo kunye ne-ethe-ethe.Izithako zijikelezwe ngokupheleleyo yi-nitrogen engamanzi ukunciphisa ukudibana nomoya kunye nokugcina incasa yazo yokuqala kunye nexabiso lesondlo.
Inkqubo yojongano lomatshini womntu, ukuzicinezela kunye noxinzelelo rhoqo, ukuphucula ukusebenza kakuhle kwemveliso; Ixhotyiswe ngeswitshi yokukhupha, i-alamu yenqanaba lolwelo, umboniso woxinzelelo kunye neminye imisebenzi, ukusebenza ngokukhuselekileyo.
▷ Uyilo olwenziwe ngumntu
Ukusebenza kweendleko eziphezulu, unyawo oluncinci, ivili elikumgangatho ophezulu wendalo iphela, kulula ukuhamba, ixesha elide;
Ngaphambili: Samrt Cap
Okulandelayo: Itanki yokukhenkceza ukutya kwaselwandle
Imilinganiselo (Ubude x Ububanzi x Ubude) (mm) 940 x 690 x 1140(Ubungakanani bokuSonga beBar) 1550 x 690 x 1140(Ubungakanani bokwandiswa kweBar)
Ubunzima obuNina (kg) 105
Sebenzisa Uxinzelelo (mPa) <0.1 ( Ulawulo lweVoltage eMiselweyo 0.025 MPa )
I-alamu yeNqanaba eliPhantsi 940 iNqanaba loLulwelo ngaphantsi kwe-50 mm
Isixhobo esingundoqo seSikhongozelo seNitrojeni engamanzi 06Cr19Ni10
Izinto ezingundoqo zeBhokisi I-Q235 (Ukutshiza ngePlastiki yoBubushushu obuphezulu kwimiphezulu yangaphakathi nangaphandle)
Ukucaciswa koMsonto weSibuko seNitrogen eLiquid Rehydration Port UNF3/4 Umsonto waNgaphandle
Ubonelelo lwaMandla lwaNgaphandle (V) I-AC220V
Umthamo osebenzayo weSikhongozelo seNitrojeni yolwelo (L) 50
IFomu ye-Thermal Insulation ye-Liquid Nitrogen Tank I-Vacuum ephezulu ye-Multilayer Insulation